Isu Le-D'Alembert - UK 2021 ✅
Home » Imidlalo Yekhasino » I-Roulette » Isu Le-D’Alembert
Izinto Okufanele Uzazi Ngecebo le-D’Alembert
Nakhu ukuthi ungalidlala kanjani isu le-D’Alembert Ukubheja
Uma umusha etafuleni le-roulette noma umdlali ojwayelekile olandela ukujabulisa nabaphumelele abambalwa, Isu le-D’Alembert kufanele lisebenze njengokulingana okufanele. Iqukethe ukufana okuthile ngecebo elidumile laseMartingale, kepha lena yenzelwe njengenguqulo enobungozi obuncane futhi kufanele isebenze kahle engaphinda isigxobo somuntu emuva, njengokungajwayelekile noma ngisho nokubomvu noma okumnyama.
Leli qhinga empeleni labelana ngokufana okuthile futhi liphikisana nemikhawulo yeSu leMartingale. Njengecebo, lokhu kwasungulwa futhi kwathandwa nguJean Le Rond D’Alembert, udokotela waseFrance nesazi sezibalo. Wazalwa ngesikhathi se-18 th Ikhulu leminyaka, u-D’Alembert unenkolelo yokuthi yonke imiphumela enamathuba angama-50-50 wokuwina izohlala ilinganisana.
Uchaze ukuthi Umphumela A uzoba sethubeni eliphakeme lokuwina ukube Umphumela B wenzeke kaningi ngokulandelana. Isibonelo, uma ukubheja ‘okubomvu’ kudlala isikhathi eside impela, kulandela ukuthi ithuba lokushaya ‘omnyama’ kumjikelezo olandelayo liyakhula. Ngamafuphi, kumgomo we-D’Alembert, imiphumela kulindeleke ukuthi ilinganisane, okuholela ekutheni yomibili imiphumela ikhonjiswe cishe inani elifanayo lezikhathi. Vele, lo mqondo we-D’Alembert unezinkinga ezithile ngokwazi ukuthi ukujikeleza ngakunye kwesondo kuhlala kungahleliwe, noma ngabe inombolo ethile noma umcimbi othile wenzeke izikhathi ezingama-20 noma ezingama-50 zilandelana.
Leli qhinga liza nemithetho eyisisekelo futhi liphelele lapho kudlalwa ezinye izindlela zokubheja ezingakuphindaphinda kabili ukubheja kwakho, okufana nokulingana noma okungajwayelekile nokubomvu noma okumnyama. Okokuqala, uzodinga ukukhomba kuqala isigxobo sesisekelo ofuna ukusithatha. Kukho konke ukulahlekelwa ozohlangana nakho etafuleni le-roulette, uzodinga ukukhuphula ukubheja kwakho ngeyunithi, kepha uzokwehlisa ngenombolo efanayo uma kungenzeka uwine umjikelezo.
Vele, okuhlukile kulo mthetho ukuthi uma uwina okokuqala, futhi ngeke ukwazi ukwehlisa ukubheja kwakho kwesisekelo. Lapha, iyunithi yokubheja ilingana nesigxobo esiyisisekelo, okusho ukuthi phakathi nokudlala kwakho kuzodingeka ukhuphule futhi wehlise ukubheja kwakho ngokuya ngemiphumela yokubheja.
Yisho ngokwesibonelo uqale nge-wager eyisisekelo ebiza u- € 2, bese ukubeka lokhu ‘kubomvu’ bese ulahlekelwa lapho ibhola lehla. Uma kunjalo, udinga ukwandisa ukubheja kwakho ngeyunithi eyodwa, ukukhulisa ukubheja kuye ku- € 4 emdlalweni olandelayo. Futhi uma ulahlekelwa futhi emzuliswaneni olandelayo, uzodinga ukukhulisa ukubheja ngeyunithi, ukuyicindezela ku- € 16. Kepha uma ukwazile ukuwina, Isu le-D’Alembert lifuna ukwehliswa kokubheja kwakho okulandelayo ngeyunithi eyodwa.
Isu le-D’Alembert lathandwa nguJean Le Rond D’Alembert ngesikhathi se-18 th century futhi wabelana ngokufana okuthile necebo leMartingale
Ngesikhathi sakhe, u-D’Alembert uphakamisa ukuthi lapho kunemiphumela emibili engahle ibe khona u-A no-B nomphumela A ubukade ubonakala isikhashana, kulindeleke ukuthi Umphumela B uzovela maduze
Kucebo lokubheja le-D’Alembert, umdlali kufanele aqale aqale iyunithi yokubheja eyisisekelo